မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဝိပဿနာပွားနည်း – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
App Dowload ပြုလုပ်ရန် စာမျက်နှာ
မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဝိပဿနာပွားနည်း
ByHein Zaw Oo
အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မောင်းထောင် မြေဇင်းတောရ ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ကန္နီနည်း ဥပနိဿယ အာနာပါန သမထဝိပဿနာ ရက် (၆၀) တရားစခန်းများ၌ လာရောက် အားထုတ် ကြသည့် ယောဂီ သူတော်စင်များ ဝိပဿနာတရားများ အားထုတ်ရာ တရားစခန်း၌ရော၊ အိမ် ရောက်သည့် အခါမှာပါ လွယ်ကူ လျင်မြန်စွာ လေ့လာ ပွားများ အားထုတ် နိုင်ရန် ဉာဏ်စဉ် ပွားနည်း များကို ရေးသား၍ ဓမ္မဒါနပြု အပ်ပါသည်။
ဆရာတော် အရှင်ကေလာသ သာသနဓဇဓမ္မာစရိယ ကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ၊ ဗောဓိအေးငြိမ်းရိပ်သာ မြို့ကြီးကုန်း ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့၊ ၀၉-၇၃၀ ၃၅၇၅၇ ၀၉-၂၀ ၃၃၃၄၄။
ယောဂီတို့ နေ့စဉ် မှန်မှန် ဘုရားရှိခိုး ကန်တော့ကြ ရဲ့ လား။ ဘုန်းကြီး အမြဲ ရှိခိုး ကန်တော့ တဲ့ နေရာ တွေပြော ပြမယ်။ ဘုန်းကြီး ၁၃၂၅-ခုနှစ် ကစ၍ ယနေ့ အထိ မိမိနေ တဲ့နေရာ ရောက် တဲ့ နေရာ ကနေ………………..
၁။ အနောက်မြောက်ထောင့်၊ ရာဟုထောင့်ရှိ အိန္ဒိယ မဇ္ဈိမဒေသသည် ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်တော် မူကြ တဲ့ ဘုရား အဆူဆူ တို့၏………..
(က) ဖွား – မွေးဖွားတော်မူရာဌာန
(ခ) ပွင့် – ဘုရားဖြစ်ရာဌာန
(ဂ) ဟော – ဓမ္မစကြာဟောကြားရာဌာန
(ဃ) စံ – ပရိနိဗ္ဗာန်စံရာဌာန တို့ကို၎င်း-
၂။ အနောက် တောင် ထောင့် ၊ စနေထောင့် ရှိ သီရိလင်္ကာ(သီဟိုဠ်)သည် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ၏ သာသနာ ထွန်းကားရာဒေသဖြစ်သည်။
(က) စွယ်တော်တိုက်ထဲက စွယ်တော်
(ခ) ထူပါရုံစေတီထဲက ဉာတ်ရိုးတော်
(ဂ) မဟာစေတီထဲက ဥဏ္ဏလုံမွှေးရှင်တော် ဓာတ်တော်
(ဃ) စေတီပေါင်းများစွာ တို့ကို၎င်း-
၃။ တောင်အရပ်ရှိ ရန်ကုန်ရွှေတိဂုံသည် ဘဒ္ဒကမ္ဘာ တွင် ပွင့်တော်မူကြသော
(က) ကကုသန်ဘုရား၏ တောင်ဝှေးတော်
(ခ) ကောဏဂုံဘုရား၏ ဓမ္မကရိုဏ်ရေစစ်တော်
(ဂ) ကဿပဘုရား၏ ရေသနုပ်တော်
(ဃ) ဂေါတမဘုရား၏ ဆံတော်ရှစ်ဆူတို့ကို၄င်း-
အဲဒီ ဌာန တွေ ကို ဘုန်းကြီး အမြဲ တမ်း မှန်းပြီး ရှိခိုး ကန်တော့ ပါသည်။ မြတ်စွာ ဘုရား က အပါဒါန်ပါဠိတော် ၌ ဝိပဿီ မြတ်စွာဘုရား ကို ရဟန်းတစ် ပါးသည် ကြည်ညို ဝမ်းမြောက် လျက် တစ်ကြိမ် ရှိခိုး၏။ ရှိခိုးတဲ့ ကုသိုလ်ကံ စေတနာ ကြောင့် ကမ္ဘာ တစ်သိန်း အပါယ်လေး ပါး မကျ ရောက်ပေ။ ဂေါတမ ဘုရားလက်ထက် ရောက်တော့ ဧကဉ္ဇလိကမထေရ် ဟု နာ မည်တွင် သည်။
ရှိခိုးကန်တော့တဲ့ အခါလဲ “နမောတဿ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုပြီး ကန်တော့ကြ။
“နမော တဿ ရွတ်ကြများစွာ
ရွှေငွေ သူဌေး မနေဖြစ်မှာ
ဂေါတမ မြတ်ဘုရား က သတ္တဝါ တွေကို သနားလို့ သာသနာ (၅၀၀၀) ထားခဲ့ တာ။ အခု (၂၅၀၀) ကျော် သွားပြီ.။ အကုန် များပြီး အကျန်က နည်း လာပြီ။ ကျန်တဲ့ ဟာလဲ ကိုယ့်ဥစ္စာ လို့ ပြော မရ ဘူး….။ ကိုယ် လုပ် သလောက် ကိုယ်ရ မှာပဲ။ သိလို့ ရှိ ရင် နှမြောစ ရာကောင်း လှတယ်။ နှ မြော တယ်ဆို တာ တန်ဘိုးသိမှ နှမြော တာ ဘုရားရှင် က သတ္တဝါ တွေကို သနားတော် မူလို့ ထားခဲ့တဲ့ တရားတော် တွေ လေးသင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာ တစ်သိန်း ကျင့်ကြံ အားထုတ် ပြီး၊ ဘဝပေါင်း များစွာ စ တေး ပြီးမှ ပေးခဲ့ တဲ့ တရား တွေ။ အခု လူတွေ မယုံကြ တော့ ဘူး။ ဧဝံ ဗုဒ္ဓါ အစိန္တိယာ ဓမ္မာ၊ ကြံ စည်လို့ မရနိုင်ဘူး။ မသိတော့ မယုံကြည် ဘူး။ ကြည့်လေ ကိုယ့်ကို သနားလို့ ပေးခဲ့တဲ့ တရားကို သာသနာပရယ်၊ သာသနာ တွင်းရယ်လို့ ဝေဖန်နေ ကြတာ မခက်ဖူးလား။
ဘုရားရှင်က သမထ တရားတွေ ဟာ သာသနာပ မှာပဲ ကျင့်ရမယ် သာသနာ တော်တွင်း မှာ မကျင့် ရဘူး မဟောခဲ့ ပါဘူးဗျ။ ဘုရား အဆူဆူဟာ ဒီ အာနာပါန ကို ကျင့်ပြီးမှ ပွင့်ကြ တာပါ ဗျ။ မြေလျှိုး မိုးပျံနိုင် တဲ့ ရဟန္တာတွေ လည်း အာနာပါနသမထဝိပဿနာ ကျင့်လို့ ဖြစ်ကြတာဗျ၊ သမထ မပါတဲ့ ရဟန္တာတွေ ဒီလို မရကြ ဘူး၊ ဒီတော့ သူများ ပြောတိုင်း နားမယောင် ကြနဲ့။
သာသနာ ဆုတ်တယ် ဆိုတာ ဒီလိုပဲ၊ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရား တော်တွေ ကွယ်ပျောက် ရမှာ နှမြော စရာ ကောင်း လှတယ်။ (မောင်းထောင်မြေဇင်း တောရဆရာတော်ကြီး)
စိတ်ဝယ်ရွှင်ပြ အားရ ပြီးတော့ မနေနဲ့။
ဘုရားဖူးတဲ့ သမထကုသိုလ်က တစ်သိန်း တန်ဘိုး ဖြတ်လို့ ရမယ်ဆိုရင် ဝိပဿနာကုသိုလ်က သိန်းရာထောင်မက တန်ဘိုးရှိတယ်။ (ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်)
အနိစ္စာဒိဝသေန ဝိဝိဓေဟိ အာကာရေဟိ ဓမ္မ ပဿတီတိ ဝိပဿနာ။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီအဋ္ဌကထာ)
အနိစ္စ အစရှိသော အစွမ်း ဖြင့် အထူးထူး အပြားပြား ကုန်သော တေဘူမက တရား တို့ကို ရှုမှတ်တာကို ဝိပဿနာ ဟုခေါ်သည်။ ပေါ်ရာ ပေါ်ရာ ရှုမှတ်တာကို ဝိပဿနာဟုခေါ် သည်။ ပေါ်ရာ ပေါ်ရာ ကြည့်တာကို ဝိပဿနာဟုခေါ် သည်။
တတော ယထာနာမ ပုရိသော အန္တာဂေဟေ သပ္ပံ ဒိသွာ တံ အနုဗန္ဓမာနော် တဿ အာသယံ ပဿတိ၊ ဧ၀မေဝ အယမ္ပိ ယောဂါဝစရော တံနာမံ ဥပပရိက္ခန္ဓာ ဣဒံနာမံ တံ နိဿာယ ပဝတ္တတီတိ ပရိ ယေသမာနော တဿ နိဿယံ ဟဒယရူပံ ပဿတိ။
တတော တသ္မိံကာလေ – ထိုသို့နာမ်ရုပ်ကို သိမ်းဆည်းရာ၌။ ယထာနာမ-ဥပမာမည်သည်ကား။ ပုရိသော-ယောက်ျား သည်။ အန္တောဂေဟေ-အိမ်တွင်း ၌။ သပ္ပံ-မြွေကို။ ဒိသာ-မြင်၍၊ တံ-ထိုမြွေကို။ အနုဗန္ဓမာနော-အစဉ်တစိုက် လိုက်လတ်သည် ရှိသော်။ တဿ – ထို မြွေ၏။ အာသယံ-အောင်းရာ နေရာကို။ ပဿတိယထာ-မြင်၏သို့။
ဧ၀မေဝ-ဤအတူသာလျှင်။အယမ္ပိယောဂါဝစရော -ဤယောဂါဝစရသည်လည်း။ တံနာမံ-ထိုနာမ်ကို။ ဥပပရိက္ခန္တာ- ဉာဏ်ဖြင့် ကပ်၍ရှု အပ်သည်ရှိသော။ ဣဒံနာမံ- ဤနာမ်သည်။ ကိံ- အဘယ် တရားကို။ နိဿယ-မှီ၍ ။ ပဝတ္တတိ-ဖြစ်သ နည်း ။ ဣတိ- ဤသို့ ။ ပရိ ယေသမာနာ- ထက်ဝန်း ကျင်မှ ရှာလတ် သော် ။ တဿ-ထိုနာမ်၏။ နိဿယံ-မှီရာ ဖြစ်သော ။ ဟဒယရူပံ- ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို။ ပဿတိ- မြင်၏။
(ဝိသုဒ္ဓိမဂ်အဋ္ဌကထာ ၂, ၂၂၂)
* ဝိပဿနာ ရှုတဲ့အခါ နာမ်၏ မှီရာဖြစ်သော ဟဒယ ဝတ္ထုရုပ်ကို မြင်သည့်အတွက်ကြောင့် မိမိရဲ့ စိတ်ကို စိတ် ကလေး ရုံးစိုက်ရာ ဌာန ချုပ်ဖြစ်တဲ့ ရင်ဝ ရင်ချိုင့် ဟဒယ နှလုံး ဟဒယဝတ္ထုရုပ် ၌ ထားလျက် ပေးထားတဲ့ တရားကို ပွားရ မည်။
(က) ရူပ ပရိဂ္ဂဟ ပွားပုံ
ဧဝံ ရူပံ၊ ဧဝံ ရူပံ။ ဧဝံ-ဤသည်ကား၊ ရူပံ-ရုပ်တည်း၊ ဧဝံ-ဤသည်ကား၊ ရူပံ-ရုပ်တည်း ဟုပွား။ (သို့မဟုတ်) မိမိ ဥပစာ ရင်ဝကို စိတ်ထား၍ ရုပ်-ရုပ် ဟူ၍ ပွား။ ပုဗ္ဗကိစ္စ(၄)ပါးတို့တွင် ရုပ်ကို သိမ်းဆည်း သည်ဖြစ် ၍ ရူပပရိဂ္ဂဟ ဟုခေါ် သည်။
(ခ) နာမ ပရိဂ္ဂဟ ပွားပုံ
ဧဝံ နာမံ၊ ဧဝံ နာမံ။ ဧဝံ – ဤသည်ကား၊ နာမံ-နာမ်တည်း၊ ဧဝံ-ဤသည်ကား၊ နာမံ-နာမ်တည်း ဟုပွား။ (သို့မဟုတ်) မိမိ ဥပစာ ရင်ဝကို စိတ်ထား၍ သိသည်-သိသည်ဟု ပွား။ ဤ သို့ ပွား ခြင်းသည် ပုဗ္ဗကိစ္စလေးပါးတို့ တွင် နာမ်ကို သိမ်းဆည်းသည်ဖြစ်၍ နာမပရိဂ္ဂဟ ဟုခေါ်သည်။
ဂ) ပစ္စယပရိဂ္ဂဟ ပွားပုံ
အဝိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ၊ အာဟာရ၊ အတိတ် အကြောင်းတရာငါးပါးသည် ပြုပြင်သည်-ပြုပြင်သည် ဟုပွား။ ဤသို့ ပွားခြင်းသည် ပုဗ္ဗကိစ္စ (၄)ပါးတို့ တွင်အကြောင်းကို သိမ်းဆည်း သည်ဖြစ်၍ ပစ္စယပရိဂ္ဂဟ ခေါ်သည်။
(ဃ) အဒွါနပရိဂ္ဂဟ ပွားပုံ
အဝိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ၊ အာဟာရ၊ အတိတ် အကြောင်းတရားငါးပါးပြုပြင်၍ ဖြစ်ဆဲ ပြု ပြင်၍ ဖြစ်ဆဲ ဟု ပွား။ ဤသို့ ပွားခြင်းသည် ပုဗ္ဗကိစ္စ (၄) ပါးတို့တွင် အဓွန့်ကို သိမ်းဆည်းသည် ဖြစ်၍ အဒ္ဓါနပရိဂ္ဂဟဟု ခေါ်သည်။
“ဉာဏ်စဉ် (၁၀) ပါး ပွားများပုံ”
အဝိဇ္ဇာ၊ တဏှာ၊ ဥပါဒါန်၊ ကံ၊ အာဟာရ၊ အတိတ် အကြောင်းတရား ငါးပါး ပြုပြင်၍ တရိပ်ရိပ် တဖွဲ့ ဖွဲ့ တသဲသဲ အားဖြင့် သူ့ အလိုလို ဖြစ်ပျက်၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့သည် အမြဲမရှိ။ အနိစ္စ…. အနိစ္စ…. အနိစ္စ (ဤသို့ ရှုခြင်း ဖြင့် လက္ခဏာ ယဉ်သုံး ပါးလုံးပြီး ၏)
အဝိဇ္ဇာ … အတိတ် အကြောင်းတရား ငါးပါး ပြုပြင် ၍ တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် သူ့ အလိုလို ဖြစ်ပျက် ၍နေသော ရုပ်နာမ်တို့ သည် ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း နှိပ်စက်၍ နေသော ကြောင့် အလွန် တရာ မှ ဆင်းရဲ လှပါ တကား။ ဒုက္ခ • • • ဒုက္ခ • • • ဒုက္ခ • • • ။
အဝိဇ္ဇာ … အတိတ် အကြောင်း တရား ငါးပါး ပြုပြင်၍ တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် သူ့အ လိုလိုသတ် ဖြစ်ပျက် ၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့သည် အနှစ် သာရ မရှိ အလို သို့ မလိုက်၊ အစိုးမရ ကိုယ် မဟုတ်………….. အနတ္တ….အနတ္တ….အနတ္တ။
အကြောင်း တရားတွေ သူ့လိုလို ဖြစ်ပေါ်၍ လာသော ကြောင့် ရုပ်နာမ် တရားတွေ တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ သူ့အ လိုလို အကြောင်း တရားတွေ သူအ လိုလို ပျက်၍ သွား သောကြောင့် ရုပ်နာမ် တရားတွေ တ ရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ၊ တသဲသဲ အားဖြင့် သူ့အ လိုလို ပျက်စီး ၍ နေပါတ ကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ….အနိစ္စ…..အနိစ္စ ။
ယောစ ဝဿသတံ ဇီဝေ၊ အပဿံ ဥဒယဗ္ဗယံ။
ဧကာဟံ ဇီဝိတံသေယျာ၊ ပဿတော ဥဒယဗ္ဗယံ။
ယောစ – အကြင်သူ သည်လည်း။ ဥဒယဗ္ဗယံ – ရုပ်နာမ် တို့ဖြစ်ပုံ၊ ပျက်ပုံကို။ အပဿံ- အိပ်မက်တွင်မျှ မမြင် ရ ဘူးဘဲ။ ဝဿသတံ- အနှစ် တစ်ရာလုံး။ ဇီဝေ အသက်ရှည် ၏။
တဿ-ထိုသူ၏။ ဇီဝိတာ-အသက်ရှည်မူ ထက်၊ ဥဒယဗ္ဗယံ-ရုပ်နာမ် တို့၏ ဖြစ်ပုံပျက် ပုံကို။ ပဿတော မြင်သော သူ၏။ ဧကာဟံ- တစ် ရက်မျှ။ ဇီဝိတာ- အသက် ရှည် ခြင်းသည်။ သေယျော- မြတ်သေး၏။
ဆောင်ပုဒ် – ဖြစ်ပျက် နှစ်ဖြာ မမြင်ပါဘဲ တစ်ရာ အသက်ရှည် သည်ထက် လည်း၊ ဖြစ်ပျက် နေဟန် ရုပ်နှင့် – နာမ်ကို အမှန် မြင်လျက် ဉာဏ်စဉ် တက်၍ တစ်ရက် တာမျှ သက်ရှည် ရသော် လောက လူ့ရွာ ကောင်း မြတ်သာ သည် မြတ်စွာ ဗုဒ္ဓ မိန့်ခွန်း တည်း။
အကြောင်း တရားတွေ သူ့အ လိုလို ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် ရုပ်နာမ်တရားတွေ တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် သူ့အ လိုလို ပျက်စီး ၍ နေပါ တကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ…အနိစ္စ…အနိစ္စ။
ဒိဋ္ ဌိပယ်ဖျက်၊ ကိုယ်အ သက်ကို ငဲ့ကွက် မညှာ၊ ဘာဝနာ တက်ကြွ၊ အာဇီ ဝဖြောင့်၊ ကြောင့် ကြပယ်စွန့်၊
ကြောက်ရွံ့ မသီ၊ ခန္တီအား ဖြည့် တရား မွေ့၏။ အလေ့ သူတော် တရားပျော်လျက် ငါးဖော်အာရုံ ရှေးကပုံလို မခုံ မမင် တရားခင်သည် ဘင်္ဂ ဉာဏ်ရည်ရှစ် မျိုးတည်း။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍နေသော ရုပ် နာမ်တို့ သည် ဘေးကြီး ပါတကား ကြောက်စ ရာကြီး ပါတကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ…အနိစ္စ…အနိစ္စ …။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အ လိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့သည် အပြစ်ကြီး ပါတကား။ ရန်သူကြီး ပါတကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ..အနိစ္စ..အနိစ္စ..။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့်ပျက်စီး ၍ နေသော ရုပ်နာမ်တို့သည် ပျင်းစရာ ကြီးပါတကား၊ ငြီးငွေ့စရာ ကြီးပါတကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ…အနိစ္စ …အနိစ္စ….။
အကြောင်းတရားတွေ ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲအားဖြင့် ပျက်စီး၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့မှ လွတ်ပါမူကား ကောင်းလေစွ၊ လွတ်ငြိမ်း ရပါမူ ကောင်းလေစွ၊ ဖယ်သွား ရပါမူ ကောင်း လေစွ။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ…..အနိစ္စ…..အနိစ္စ …။
ဤဉာဏ်ကို နိဗ္ဗာန်ဝင် တံခါး မကြီးဖြစ် ၍ ပထမ သင်္ခါရု ပေက္ခာ ဟုခေါ်သည်။
၈။ ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ပွားပုံ ၊
ပဋိ- တဖန်၊ သင်္ခါ- သုံးသပ်၊ နောက် ကဉာဏ် (ဥဒယဗ္ဗယ၊ ဘင်္ဂ၊ ဘယ၊ အာဒီနဝ၊နိဗ္ဗိန္ဒ၊ မုဉ္စိတုကမျတာ) တို့ ကို ပြန်ပွား ရသော ဉာဏ်ဖြစ်သည်။
အကြောင်းတရားတွေ ဖြစ်ပျက် နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲအားဖြင့် ဖြစ်ပျက် ၍နေသော ရုပ်နာမ်တို့သည်။ အမြဲမရှိ ..အနိစ္စ…အနိစ္စ…။
အကြောင်းတရားတွေ ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲအားဖြင့် ပျက်စီး၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့သည် အမြဲမရှိ …အနိစ္စ…..အနိစ္စ….။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍နေသော ရုပ်နာမ်တို့သည် ဘေးကြီးပါတကား၊ ကြောက် စရာကြီးပါတကား။ အမြဲမရှိ ..အနိစ္စ..အနိစ္စ..။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲအားဖြင့် ပျက်စီး၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့သည် အပြစ်ကြီး ပါတကား၊ ရန်သူ ကြီးပါ တကား။ အမြဲမရှိ ..အနိစ္စ..အနိစ္စ..။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ နေသော ကြောင့် သူ့အ လိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး၍ နေသော ရုပ်နာမ်တို့သည် ပျင်းစရာ ကြီးပါတကား၊ ငြီးငွေ့ စရာကြီးပါ တကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ…အနိစ္စ..။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍ နေသော ရုပ်နာမ် တို့မှ လွတ်ပါ မူကား ကောင်းလေစွ၊ ဖယ်သွား ရပါမူ ကောင်းလေစွ၊ ကောင်းလေစွ။
၉။ သင်္ခါရုပက္ခာဉာဏ်။ ခြောက်ဉာဏ်ပေါင်းပွားနည်း
(က) အကြောင်း တရားတွေ ဖြစ်ပျက်၍ နေသော ကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ဖြစ်ပျက် ၍ နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံး မမှု လျစ်လျူ ရှုအပ် သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်း နှိပ်စက် ၍ နေသော ကြောင့် အလွန် တရာမှ ဆင်းရဲလှ ပါတကား။ ဒုက္ခ……….ဒုက္ခ ။
(ခ) အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အ လိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် မချစ် မမုန်း ၊ နှလုံးမမူ လျစ်လျူ ရှုအပ်သော ရုပ်နာမ် တို့သည်- အမြဲမရှိ အနိစ္စ….အနိစ္စ ။
(ဂ) အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် လျစ်လျူ အပ်သော ကြောက်စရာ ကောင်းသော ရုပ်နာမ်တို့ သည်- အမြဲမရှိ အနိစ္စ….အနိစ္စ ။
(ဃ) အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် လျစ်လျူ ရှုအပ်သော အပြစ်ကြီးသော ရုပ်နာမ်တို့သည်- အမြဲမရှိ အနိစ္စ…..အနိစ္စ။
(င) အကြောင်း တရားတွေ သူအလိုလို ပျက်၍နေ သောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အား ဖြင့် လျစ်လျူရှု အပ်သော ပျင်းစရာ ငြီးငွေ့ စရာကောင်း သော ရုပ်နာမ်တို့သည်- အမြဲမရှိ အနိစ္စ….အနိစ္စ ။
(၈) အကြောင်း တရားတွေ သူအလိုလို ပျက်၍ နေသောကြောင့် သူ့အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ ဖြင့် လျစ်လျူ ရှုအပ်သော လွတ်ပါမူ ကောင်းသော လွတ်ငြိမ်းပါမှု ကောင်းသော ဖယ်သွားရပါမူ ကောင်းသော ရုပ်နာမ်တို့သည်- အမြဲမရှိ အနိစ္စ..အနိစ္စ ။ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းဖြင့် နှိပ်စက် ၍နေသောကြောင့် အလွန်တရာ မှ ဆင်းရဲပါတကား၊ ဒုက္ခ…ဒုက္ခ။ ငါကိုယ်မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ်သာရ မရှိ အလို သို့မလိုက် အစိုးရ ကိုယ်မဟုတ်- အမြဲမရှိ အနတ္တ…..အနတ္တ ။
အကြောင်း တရားတွေ ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် အလိုလို တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍ သွားသော မချစ် မမုန်း နှလုံး မမူ လျစ်လျူ ရှူအပ်သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ငါ့ကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား၊ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အမြဲမရှိ အနိစ္စ……အနိစ္စ ။
ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းဖြင့် အမြဲမပြတ် ဖိစီးနှိပ်စက်၍ နေသောကြောင့် အလွန်တရာ ဆင်းရဲလှပါတကား။
အနှစ်သာရမရှိ အလိုသို့မလိုက် အစိုးမရ ငါမဟုတ်
(က) အကြောင်း တရားတွေ သူ့အလိုလို ဖြစ်ပျက်၍ သွားသောကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ဖြစ်ပျက် ၍နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံးမမူ လျစ်လျူရှု အပ်သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ငါကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ်သာ ရမရှိ အလိုသို့မ လိုက် အစိုး မရ ကိုယ်မ ဟုတ်။ အနတ္တ…..အနတ္တ…..အနတ္တ ။
(ခ) အကြောင်း တရားတွေ သူ့အလိုလို ပျက်၍၊ သွားသောကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက် စီး၍ နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံး မမူ လျစ်လျူ ရှုအပ် သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ငါကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ် သာရ မရှိ အလိုသို့ မလိုက် အစိုးမရ ကိုယ် မဟုတ်။
(ဂ) အကြောင်း တရားတွေ သူ့ အလိုလို ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံးမမူ လျစ်လျူ ရှုအပ်သော ဘေးကြီးဖြစ်သော ကြောက်စရာ ကောင်း သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ငါ့ကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ်သာရမရှိ အလိုသို့ မလိုက် အစိုး မရ ကိုယ် မဟုတ်။ အနတ္တ….အနတ္တ…..အနတ္တ ။
(ဃ) အကြောင်း တရားတွေ သူ့ အလိုလို ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံးမမူ လျစ်လျူရှု အပ်သော အပြစ် ကြီးသော ရန်သူကြီး ဖြစ်သော ရုပ်နာမ် တို့ သည် ငါ့ကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ်သာရမရှိ အလိုသို့ မလိုက် အစိုးမရ ကိုယ်မ ဟုတ်။ အနတ္တ…..အနတ္တ….. အနတ္တ ။
(င) အကြောင်း တရားတွေ သူ့ အလိုလို ပျက်၍ သွားသော ကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက် စီး၍ နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံးမမှု လျစ်လျူ ရှုအပ် သော ပျင်း စရာကောင်း သော ငြီးငွေ့ စရာ ကောင်း သော ရုပ်နာမ် တို့သည် ငါ့ကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ် သာရမရှိ အလိုသို့ မလိုက် အစိုးမရ ကိုယ် မဟုတ်။ အနတ္တ….အနတ္တ….အနတ္တ ။
(စ) အကြောင်း တရားတွေ သူ့ အလိုလို ပျက်၍ သွားသောကြောင့် တရိပ်ရိပ် တဖွဲဖွဲ တသဲသဲ အားဖြင့် ပျက်စီး ၍နေသော မချစ် မမုန်း နှလုံး မမူ လျစ်လျူရှု အပ်သော၊ လွတ်ပါမူ ကောင်းသော-လွတ်ငြိမ်း ပါမူ
ကောင်းသော ဖယ်သွား ပါမူ ကောင်းသော၊ ရုပ်နာမ်တို့ သည် ငါ့ကိုယ် မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ ငါ့ဥစ္စာ မဟုတ် သုဉ်း၍ နေပါ တကား။ အနှစ် သာရမရှိ အလိုသို့ မလိုက် အစိုးမရ ကိုယ် မဟုတ်။
အနုလောမဉာဏ်ကား မဂ်အားလျော်သောဉာဏ်တည်း၊ ၎င်းဉာဏ် (၁၀)ပါးကို လောကီ ဉာဏ်(၁၀) ပါးလို့ လည်း ခေါ်သည်။ လောကုတ္တရာဉာဏ်ကား …
၄။ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် ဤဉာဏ်လေးပါး ကိုခေါ်သည် ပေါင်းသော် ဉာဏ်စဉ် (၁၄)ပါး ဟုခေါ်သည်။
အထက်ပါ ဉာဏ်စဉ်တွေ ကို အသီး အခြား တစ်ပါး စီလိုက် ရှုနေဘို့ မလို၊ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်ကို သာလျှင် အား ထုတ်က ကြွင်းသော ဉာဏ်တွေ အလိုလို ပေါ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ဝင် စံမြန်းနိုင် ပါသည်။
လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက “ဘင်္ဂဉာဏ်ဟာ အရေးကြီးဆုံး ဉာဏ်ဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂဉာဏ်ကို နာနာပွား ရမည်။ နေ့စဉ် ပွား ရမည်”ဟု မိန့် လေသည်။ ဘင်္ဂဉာဏ် ကို စ ပွားက ကိစ္စ ပြီးနိုင် သည်ဟု ဆိုလို သည်။ သမ္မသနဉာဏ် ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်၊ ဘင်္ဂဉာဏ်ကို နေ့စဉ်ပွားက ကိစ္စပြီးနိုင်သည်ဟုဆို လိုသည်။ သမ္မသန ဉာဏ်၊ ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်၊ ဘင်္ဂဉာဏ်ဟု သုံးပါး ပင်ပြားငြားသော် လည်း သုံးသပ်ဆင်ခြင် ပွားများ ရာမှာ အနုအရင့်သာ ကွဲပါသည်။ အကြောင်းမထူးပါ။
ငါတို့ ကျေးဇူးရှင် ကန္နီ ဆရာတော် ဘုရားကြီးက ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်ကို ပဓာန နန်းထိုင် သည်ဟုခေါ် သည်။ အရေးကြီး ဆုံးဉာဏ်ဟု ဆိုလို သည်၊ ဥဒယဗ္ဗယညဏ် တစ်ခုကိုသာ နေ့စဉ်ပွား နေပါ ဘယဉာဏ် အစရှိ သော အထက်ထက်သော ဉာဏ်များကို တထီးတ နန်းရှုနေဘွယ် အထူးအား ထုတ်နေ ဘွယ်မဟုတ် အား ထုတ်ရင်း ဖြစ်ပေါ် လာလို့ ပေါ်ဉာဏ်ဟု ခေါ်သည်။ အရှင်ဗုဒ္ဓဝံသ ယောဂီပါရဂူကျင့်စဉ်ကျမ်းစာ- ၁၄၉
ဉာဏ်စဉ် (၁၀) ပါး လင်္ကာ
၁။ ရုပ်နာမ် နှစ်ဝ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တဟု သုံးသပ်ပြု မှတ်ရှုသမ္မသ နဉာဏ်။
၂။ ဖြစ်ပျက် နှစ်ဝ မြင်ပြန်က ဥဒယဗ္ဗယဉာဏ်။
၃။အဖြစ် မရှု အပျက်ရှု မှတ်မှုဘင်္ဂဉာဏ်။
၄။ဖြစ်ပျက် ရုပ်နာမ် ဘေးထင်ပြန် မှတ်ရန်ဘယဉာဏ်။
၅။ ဖြစ်ပျက်ရုပ်နာမ် ပြစ်ထင်ပြန်မှတ်ရန်အာဒီန၀ဉာဏ်။
၆။ ဖြစ်ပျက် ရုပ်နာမ် ငြီးငွေ့ပြန် မှတ်ရန်နိွန္ဒဉာဏ်။
၇။ ရုပ်နာမ်နှစ်ဝ သင်္ခါရမှ လွတ်ရလိုဘိ စိတ်သန်ရှိမှတ်ဘိမုဉ္စိတုကမျတာဉာဏ်။
၈။ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ရှုဉာဏနှင့် တဝဖန်ဖန် အားထုတ်ပြန် မှတ်ရန်ပဋိ သင်္ခါဉာဏ်။
၉။ ဖြစ်ပျက်သမျှ သင်္ခါရ၌ ချစ်လှမရှိ မုန်းမရှိရင် ရှုဘိလျစ်လျူ ထင်ကမူ မှတ်ယူ သင်္ခါရုပေက္ခာ ဉာဏ်။
၁၀။ သင်္ခါရုပေက္ခာဉာဏ် လွန်ထက်သန်သော် လေးတန်သစ္စာ ပိုင်းခြား ကာဖြင့် သိရာလျော်မှု မှတ်ရှုအနု လော မဉာဏ်။
၁၁။ အနုလောမဉာဏ် ဖြစ်ပြီးပြန်သော် တဖန်ပုထုဇဉ် နွယ်ဝင်ပယ်ဖြတ် ဂေါတြဘူမှတ် ရိယာဇာတ် ဖြစ်လတ်သောတာပန်။
၁၂။ တေဘူမက သင်္ခါရကို မုချမမြဲ ဒုက္ခခဲနှင့် တစ်နဲ အနတ္တ ရှူပြန်ကသော် လေးဝဖိုလ်ပေါက် အထက် ရောက် ထွန်းပေါက် မြတ်နိဗ္ဗာန်။
ညောင်လွန့် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက –
မြင်သမာဓိ ရူဝိပဿနာ ဤနှစ်ဖြာ ခွဲကာ သိမှတ်ပါ။
တကိုယ်လုံးတုံ ထက်အောက်စုန် ရှုတုန်အနိစ္စ။
“အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ တရားပွားများရကျိုး”
“အနိစွာ အဋ္ဌဝီသတိ ကပ္ပါနိ
ဒုက္ခာ သတ္တရသ ကပ္ပါနိ
အနတ္တာ ဝီသတိ ကပ္ပါန်
အနိစ္စာ-အနိစ္စဟု ရှုမှတ်ပွားများ အား ထုတ်နေ သည် ရှိသော် (ဝါ) ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ် နေသော သူ သည် အဋ္ဌဝီသတိကပ္ပါနိ-နှစ်ဆယ့်ရှစ် ကမ္ဘာ တိုင်တိုင် အပါယ် လေးပါး မလားရောက် နိုင်။
ဒုက္ခာ-ဒုက္ခဟု ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ် နေသည် ရှိသော် (ဝါ) ရှုမှတ်ပွားများ အားထုတ် နေသောသူ သည် သတ္တရသကပ္ပါနိ၊ တစ်ဆယ့် ခုနှစ် ကမ္ဘာတိုင်တိုင် အပါယ် လေးပါး မလား ရောက်နိုင်။ အနတ္တာ-အနတ္တဟု ရှုမှတ်ပွား များအား ထုတ်နေ သည်ရှိသော် (ဝါ) ရှုမှတ် ပွားများ အားထုတ် နေသော သူသည် ဝီသတိကပ္ပါနိ၊ ကမ္ဘာနှစ် ဆယ်တိုင်တိုင် အပါယ် လေးပါးမ လားရောက်နိုင်။ ဣဒံဤသို့ အကျိုးတရား တိုးများရ ခြင်းသည်
ဘာဝနာယ၊ သမထဝိပဿနာ ဘာဝနာ လုပ်ငန်း ကမ္မဋ္ဌာန်း တရား ပွားများ ကြိုးကုတ် အားထုတ် ရခြင်း၏ ဖလံ အကျိုး တရား ပါပေ တည်း။
“အနိစ္စဟုသာ ရှုမှတ်ပါ နှစ်ဆယ်ရှစ်ကမ္ဘာတိုင်။
ဒုက္ခဟုသာ ရှုမှတ်ပါ တစ်ဆယ်ခုနစ်ကမ္ဘာတိုင်။
ပါယ်လေးပါးကို မလားလို ပျိုအိုတရားထိုင်။
အနိစ္စထင် မာနစင် မြင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှု
ဒုက္ခကိုထင် တဏှာစင် မြင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှု
အနတ္တထင် ဒိဋ္ဌိထင် မြင်အောင်ဉာဏ်ဖြင့်ရှု”
ထေရာပဒါ ပါဠိတော် မြန်မာ ပြန်၌ ဤ ဘဒ္ဒ ကမ္ဘာ မှ ပြ န်၍ ရေတွက် သည် ရှိသော် ကမ္ဘာ တစ်သိန်း ထက် ဝယ် ပဒုမုတ္တရ ဘုရားရှင် သည် ပွင့်၏။ ရဟန်း တစ်ပါး သည် ဘုရားရှင် ထံမှ နှစ်သက် ဖွယ်၊ နာပျော် ဖွယ်၊ သာယာ ဖွယ်ကောင်း သော သစ္စာ လေးပါး တရားကို နာကြား သည်။ ရုပ်နာမ် ဓမ္မတွေရဲ့ မ မြဲတဲ့ အနိစ္စ သ ဘော အနိစ္စသညာကို သေခါနီး ကာလ၌ ကောင်းစွာ အောက်မေ့ အမှတ်ရကာ ကွယ်လွန် သွား၏။ တာဝတိံ သာနတ် ပြည် ၌ ကမ္ဘာပေါင်း သုံးသောင်း တို့ပတ် လုံး နတ်ပြည် ၌ မွေ့လျော် ရ၏။ နတ်မင်း အဖြစ် (၅၁) ကြိမ် ဖြစ်၏။ (၂၁) ကြိမ်တိုင်တိုင် စင်္ကြာဝတေးမင်းဖြစ်၏။ ပဒေသရာဇ်မင်း အဖြစ်ကား မရေ မတွက် နိုင်။
ဂေါတမဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ ဘုရားရှင် ထံမှ –
ဥပ္ပဇ္ဈိတွာ နိရုဇ္ဈန္တိ တေသံ ဝူပသမော သုခေါ။
ဟူသော ဂါထာကို ကြားနာရသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ရှေးကမမြဲတဲ့ အနိစ္စတရားကို အောက်မေ့ ခဲ့၏။ ထို အခါ တစ်ထိုင်တည်း၌ ရဟန္တာဖြစ်ကာ အဲဒီ မထေရ်ကို ဧကဓမ္မဿဝနိယမထေရ်ဟု နာမည် ခေါ်သည်။
ညည်းညူမရှိ၊ သတိမမေ့၊ ချိန်နေ့သိပြန်၊ မျက် လှန်ကြောဆွဲ မရှိဘဲနှင့် သေလည်း မတောင့်တင်း၊ ပုပ်နံ့ ကင်းသည် ကျိုးရင်း ဝိပဿနာ တန်ခိုးတည်း။
ဈာယထ ဘိက္ခဝေ မာပမာဒတ္တ
မာ ပစ္ဆာ ဝိပ္ပဋိသာရိနော အဟုဝေတ္ထု၊
အယံ ဝေါ အမှာကံ အနုသာသနီ။
ဘိက္ခဝေ- ရဟန်းတို့ (ဝါ) သံသရာဘေး ရှုမျှော် တွေး၍ တရား အလုပ် ပွားများအား ထုတ်ကြ ကုန်သော ယောဂီ အပေါင်း သူတော် ကောင်းတို့။ တုမေ-ဒုက္ခ မီးစက် ဆူဆူ ပွက်သည့် ဒီဘက် ကမ်း မှ စခန်း ထ၍ နိဗ္ဗာန် တည်းဟူသော ဟိုဘက်ကမ်း သို့ တက် လှမ်းလို သည့် ယောဂီ အပေါင်း သင်သူတော် ကောင်းတို့
ဈာယထ-သမထ ဝိပဿနာ တရား တော်တွေကို ကျင့်ကြံ ကြပါကုန်လော၊ ပွားများ အားထုတ် ကြပါ ကုန်
လော။ မာ ပမာဒတ္တ-ထိုင်ရာမှ လည်းမ မေ့ကြနဲ့၊ သွားရာ မှာလည်း မမေ့ ကြနဲ့၊ ရပ်ရာမှာလည်း မမေ့ကြနဲ့၊ လျောင်း ရာမှာ လည်း မမေ့ ကြနဲ့၊ ကြားရာ မှာလည်း မမေ့ ကြနဲ့၊ ရပ်ရာ မှာလည်း မမေ့ ကြနဲ့၊ လျောင်းရာ မှာလည်း မမေ့ ကြနဲ့၊ စားရာမှာ လည်း မမေ့ကြ နဲ့၊ တွေ့ ထိရာ မှာလည်း မမေ့ကြ နဲ့ စိတ်ကူး စဉ်းစား ရာ မှာလည်း မမေ့ ကြနဲ့။
ပစ္ဆာ-အိုချိန်ရောက်ကြ နောက်ကာလ၌ (ဝါ) အအိုကြီး အိုတော့မှ။
ပစ္ဆာ-နာချိန်ရောက်ကြ နောက်ကာလ၌ (ဝါ) အနာရောဂါတွေ စွဲကပ်၍ နေတော့မှ။
ဝိပ္ပဋိသာရိနော- အသက် အရွယ်ကောင်း စဉ် ကျန်းမား တုန်းစဉ် အခါ တုန်းက မြတ်စွာ ဘုရား ၏ သမထ ဝိပဿနာ တရား တော်တွေ ကို မကျင့် ကြံ အားမ ထုတ်မိ ရယ် ခြင်းလေဟု နောက်မှ နောင်တ တဖန် ပူပန် ရခြင်း သည် မာ အဟုတ္ထ-မဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်။
အယံ – ဤ စကားတော်သည်
ဝေါ တုမှာကံ – သင်ချစ်သားတို့အား
အမှာကံ – ဘုရားအဆူဆူ ငါဘုရားတို့၏
အနုသာသနီ – အဆုံးအမပင် ဖြစ်ပါပေတော့သတည်း။
သတ္တဝါခပင်း ဘေးရန်ကင်း လက်ငင်းချမ်းသာ ကြပါစေ။
နိုင်ငံတသင်း ဘေးရန်ကင်း လက်ငင်းချမ်းသာ ကြပါစေ။
သတ္တဝါခပ်သိမ်း တရားကိန်း အေးငြိမ်း ကြပါစေ။
နိုင်ငံခပ်သိမ်း တရားကိန်း အေးငြိမ်း ကြပါစေ။
အရှင်ကေလာသ ဗောဓိအေးငြိမ်းရိပ်သာ ဆရာတော်၊ မြို့ကြီးကုန်း ရိပ်သာရပ်ကွက်၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊
ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ဝေစုကို ရအောင်ယူကြ
အချည်းအနှီး အချိန်မကုန်ကြပါစေနှင့်။ အခွင့်ကောင်းတွေ လက်လွတ် မဆုံးရှုံးကြပါစေနှင့်။
မခိုင်သွယ်ဦး ၏ ကိုယ်တွေ့ မျှဝေမှုများ
By Hein Zaw Oo
Dec 18, 2020 Hein Zaw Oo
သုံးချက်သိမှာ တတိယာ တရားတော်
(30.1.2021 စနေနေ့ နံနက် ကိုးနာရီ တရားတော်)
မောင်းထောင်မြေဇင်း အရှင်ပညာဒီပ အပတ်စဉ် (၁၁) မှ ယောဂီ ကိုအောင်ကိုဦး ၏ ဘုရားဖူး အတွေ့ အကြုံ
(29.1.2021 သောကြာနေ့ နံနက် ကိုးနာရီတရားတော်)
((28.1.2021 ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ကိုးနာရီ တရားတော်)
waiwai on အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗောဓိအေးငြိမ်း ရိပ်သာ လှည်းကူးမြို့ ၊မြေဇင်းတရား စခန်း၌ (၄၅)ရက် တရား အားထုတ်ခဲ့ ပုံများ အသေးစိတ် ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း…
Khin Kye Sin on မေတ္တာကမ္မဌာန်းအားထုတ်ပုံ
နီနီ on အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗောဓိအေးငြိမ်း ရိပ်သာ လှည်းကူးမြို့ ၊မြေဇင်းတရား စခန်း၌ (၄၅)ရက် တရား အားထုတ်ခဲ့ ပုံများ အသေးစိတ် ကိုယ်တွေ့ မှတ်တမ်း…
Phyu Phyu on နိမိတ်အကြောင်းတရားတော်
Ko Ko Aung on အပတ်စဉ် (၅) တရားတော်များ စုစည်းမှု
Jan 30, 2021 waiyan
Jan 30, 2021 Hein Zaw Oo
Jan 29, 2021 waiyan